Albedo na nguzo nke ike nke uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
El albedo Ọ bụ mmekọrịta dị n'etiti ike gosipụtara na ihe ahụ mere na nrugharị nke ìhè a na-ahụ anya ma na-eme ka mbara ala na-enwu: ha, n'enweghi ume nke aka ha, na-egosipụta akụkụ nke ọkụ ha na-enweta site na Anyanwụ. ọ dabere n'echiche nke ihe ahụ merenụ irradiation (ka ọchịchọ ahụ na-abịaru nso n'akụkụ ahụ, ntụgharị uche dị mkpa karị) na ọdịdị nke ntụgharị ihu. Maka ihe dị mfe, ikike ntụgharị uche nke elu nwere njikọ na agba ya: ahụ ọkụ na-enwupụta karịa nke gbara ọchịchịrị.
Ala snowy nwere albedo dị elu karịa ala ahịhịa juru. Yabụ, snow nwere albedo nkezi nke 0,7, ebe nke ọhịa ndụ akwụkwọ ndụ bụ 0,2. Albedo na mbara ala dị ihe dịka 0,1, nke pụtara na ihe a 30% nke ike anyanwụ na-abata amalite ọzọ n'ụdị kpọmkwem radieshon kwupụta ohere. Albedo nke kọntinent bụ ihe dịka 34%, ebe nke oké osimiri bụ 26% na nke igwe ojii dị ala na ọkara dị n'etiti 50% na 70%.
Ọ bụ ezie na na mbara ụwa na ike itule bụ ihe efu na efu, n'ọtụtụ ebe n'elu ụwa ka anyị na-achọta nhazi na nhazi. Fọdụ mpaghara na-enweta ume karịa ka ha na-ewepụta; ndị ọzọ, n’aka nke ọzọ, na-ewepụta ihe karịrị nke ha natara. Na mkpokọta, itule dị na oke karịa myirịta dị n'etiti 35º na 40º. N'ime ugwu ndị a, ha na-agbakọ, ma gafee na ha enweghị. Ọdịiche dị iche iche na ike a natara na emit ọnọdụ kpo oku ma ọ bụ ịjụ oyi nke ikuku, ihe ndị na-enye aka na nkesa ihu igwe na mgbasa ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Albedo na Earth's Energy Balance
Mafrutos 59 dijo
Kwesịrị ịlele uru nke extraterrestrial anyanwụ radieshon. Isc = 1367 W / m ^ 2
Zaghachi na Mafrutos 59